बर्लिन - e० यूरो उडान + छात्रावासको लागि यात्रा गर्न प्रस्ताव यात्रा समाचार
जब यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्छ, हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौं। हामी यात्रा गर्न चाहने हाम्रो जीवनको केही हिस्सा खर्च गर्दछौं, तर हाम्रो जेबलाई चोट नपु .्याईकन। त्यसोभए हामीले तपाईंको लागि ठूलो विचार फेला पारेका छौं। यो एक को बारे मा छ दुई दिन बर्लिनको यात्रा, जुन तपाईं साथीहरू र साझा गर्न सक्नुहुनेछ 80 यूरो भन्दा बढीको लागि। के तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ? ठीक छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो विशेष प्रस्ताव अब सम्झौता जुन केहि घण्टा मात्र रहनेछ।
यस्तो देखिन्छ कि सबै कुरा ठीकसँग मिल्दछ। एक धेरै विशेष गन्तव्य, हाम्रा साथीहरू वा सहकर्मीहरू लिन र बेशक, उत्कृष्ट अन्तिम मूल्य लिन सक्षम हुनु। किनकि यसले उडान उही र बसाई समावेश गर्दछ। जब सबै सुविधाहरू हुन्छन्, हामी केवल प्याकिंगमा जानु पर्छ।
1 बर्लिनमा अपराजेय मूल्यमा उडान + होस्टल
2 हाम्रा गाइडहरूको साथ २ दिनमा बर्लिन पत्ता लगाउनुहोस्
बर्लिनमा अपराजेय मूल्यमा उडान + होस्टल
हामीले औंल्याएझैं हामीले एउटा राम्रो प्रस्तावको सामना गरिरहेका छौं, त्यो कुनै श .्का बिना। किनभने यसका साथै यसमा पहिले नै समावेश गरीएको छ राउन्ड यात्राको टिकट, त्यहाँ तीन रात बसाई छ। यी सबै कुलe87 यूरो को लागी, विशिष्ट हुन। त्यसोभए, लाभ लिने र आफैलाई त्यो समय दिनु हो जुन हामी लामो समयदेखि सोचिरहेका छौं। थप रूपमा, हामी दुई दिनमा बर्लिन जान्न सक्षम हुनेछौं र हामी त्यसमा थोरै हुनेछौं।
> बुक उडान + बर्लिनमा होस्टल केवल €। For को लागि
सुरु गर्नका लागि, हाम्रो उडान मंगलबार मार्च १२ मा प्रस्थान हुनेछ र यसको फिर्ती शुक्रवार १ 12 मा हुनेछ। हामी म्याड्रिडबाट हाम्रो गन्तव्यको लागि एक सीधा उडानमा उडान गर्नेछौं। त्यहाँ एकचोटि, होटल करिब १२ किलोमिटर टाढा छ। तर त्यहाँ चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन किनकि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईले एयरपोर्टबाट होटलमा स्थानान्तरण भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो मूल्य र सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ।
थप रूपमा, यस बसाई छोटो छ, हामी धेरै सानो सामान बोक्छौं र यसले हामीलाई रोक्नबाट रोक्दैन।
होटल 'Days Inn बर्लिन शहर दक्षिण' हो। योसँग तीन तारा छन् र पूर्ण रूपमा भित्र मर्मत गरिएको छ। यसको धेरै नजिक, तपाईं रमाइलो क्षेत्रहरू वा रात्रि जीवन पाउनुहुनेछ। यो मा स्थित छ Neukölln पड़ोस। त्यहाँबाट, हरेक चोटि तपाईं बिहानको खाजामा जानुहुन्छ, तपाईं शहरको उत्तम दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। एक विलासिता जुन यस अवस्थामा, हामी हाम्रो जेब भित्र छ।
तपाईं पहिले नै आफूलाई विश्वस्त छ र के तपाई रिजर्भ गर्न चाहानुहुन्छ?? ठिक छ तपाईं अब यो गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरी
हाम्रा गाइडहरूको साथ २ दिनमा बर्लिन पत्ता लगाउनुहोस्
यो जस्तो शहर पत्ता लगाउन कहिले लामो हुन सक्दैन, तर हाम्रो सल्लाहलाई धन्यवाद जुन तपाईं आफ्नो समयको सक्दो उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ ताकि दुई दिनको अवधि चार भन्दा राम्रो जस्तो होस्। कुनै श doubt्का बिना, दुई दिनमा शहर पत्ता लगाउने उत्तम तरिका हो स्पेनिश मा एक निर्देशित यात्रा भाँडा। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, त्यसैले तपाईंलाई छनौटको साथ बिस्तार मद्दतको लागि, तल हामी तपाईंलाई सिफारिश गाईडहरूको सूची प्रस्ताव गर्दछौं जुन हाम्रा पाठकहरूलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो:
बर्लिनको मार्गनिर्देशन भ्रमण (२h घ) यहाँ क्लिक गरेर सम्झौता
बर्लिन बियर भ्रमण (H घ) यहाँ क्लिक गरेर सम्झौता
बर्लिन निजी यात्रा (4-6h) समूहहरूको लागि उत्तम विकल्प र के तपाई यहाँ क्लिक गरी भाडामा लिन सक्नुहुन्छ.
जब शहरलाई हेर्ने कुरा आउँछ, एक ठाउँ जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न बर्लिनमा आइपुग्ने बित्तिकै देख्न सकिन्छ: ब्रानडेनबर्ग गेट। यो बर्लिनको पुरानो प्रवेशद्वार थियो, यसको उद्घाटन १ 1791 XNUMX XNUMX मा भयो र हाल शान्तिमा ठूलो श्रद्धांजलि हो।
ढोका पछाडि छोडे पछि, तपाईं जहिले पनि जर्मन संसदमा हिंड्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो निकट नजिक छ। यसमा प्रवेश गर्नका लागि यो आवश्यक पर्दछ कि तपाईंले एक प्राथमिक आरक्षण गर्नु आवश्यक छ ताकि यो उत्तम हुन्छ कि तपाईंको यात्रा अघि तपाईं यसलाई अनलाइन गर्नुहुनेछ। यस अवस्थामा हामी एक ऐतिहासिक भवनको सामना गर्दैछौं जुनसँग विशाल गुम्बज छ। यदि तपाई इबर्त्सब्रसे स्ट्रीट देख्नुहुन्छ भने, यसले तपाईलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियल। यस अवस्थामा, हामी कंक्रीटले बनेका २,००० भन्दा बढी ब्लकहरू देख्नेछौं। फेरि यो युरोपमा मारिएका सबै यहूदीहरुलाई श्रद्धांजलि हो। बर्लिन पर्खालको अवशेष इतिहासको अर्को अंश हो जुन तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।
कुनै श doubt्का बिना, अर्को दिन तपाई एकदम प्रसिद्ध चौरमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न। कल अलेक्ज्याण्डर प्लाट्ज यो शहर मा एक धेरै पर्यटन स्थान हो। त्यहाँ तपाईंले टेलिभिजन टावर र विश्व घडी देख्नुहुनेछ। यसले चोट पुर्‍याउँदैन कि यदि तपाइँ ईतिहासमा अलि बढि खोज्न चाहानुहुन्छ, केही संग्रहालयहरूमा जानुहोस् र केही किनमेलको साथ अन्त गर्नुहोस्। अवश्य हामी पर्यटक वर्गहरूको उल्लेख गर्छौं, सडकहरू पछाडि पछाडि छैनन्। ती सबै मध्ये, हामी कु'धाम को रूपमा चिनिने एक हाइलाइट। त्यहाँ तपाईं देख्नुहुनेछ कैसर विल्हेल्म मेमोरियल गिर्जाघर.
के तपाई खोज्न चाहानुहुन्छ? सबै गाइडहरू र बर्लिनमा उपलब्ध गतिविधिहरू? यहाँ तपाईंसँग हाम्रो पूर्ण सूची उपलब्ध छ बर्लिनलाई पूर्ण रूपमा र समय बर्बाद नगरी आनन्द लिनको लागि
हामीले हेर्‍यौं, बर्लिनले हामीलाई इतिहास र संस्कृतिको मिश्रणको साथै मनोरञ्जनको अर्को अंश र पर्यटकको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। केहि चीज जुन दुई दिनमा पूर्ण रूपमा मिलाउन सकिन्छ। तिमीलाई लाग्दैन?
प्रस्तावमा जानुहोस् >> उडान + होस्टल २ दिन बर्लिनमा € €€ को लागि
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » साथीहरूसँग बर्लिनको लागि यात्रा प्रस्ताव: Flight० युरोको लागि फ्लाइट + होस्टल